Ukujonga emva kwi-Adams Redline RPM 460 Dual Driver
I-Adams Redline i-RPM 460 yeDual Driver
Ukujonga Emuva kwenye yee-Adams 'Trailblazers
I-Adams Redline i-RPM 460 Umqhubi omnye wafika kwindawo yeemarike zegalufa ngo-2005. "Umgca wokugqibela" ube negama lomqhubi we-Adams Golf (kunye nezinye iinkuni, kunye ne-hybrid) kwiminyaka eminzana elandelekileyo kunye neminyaka emibini emva kwe-RPM 460 Umzekelo wesibini.
Igama elithi "460" kwigama lomqhubi lalibhekiselele kubukhulu be- clubhead (460 cc - lo mqhubi waqala ngexesha apho umqhubi we-clubheads ongaphantsi kwama-460cc ayenjalo); kwaye "iDual" yayibhekiselele kwizibuko zombini ezinzima kwi-sole of the driver, enye isithende kunye nenye inye.
I-Adams Golf brand namhlanje i-TaylorMade-Adidas.
Oku kulandelayo kukuhlaziywa komqhubi we-Adams Redline RPM 460 kunye nomnye umqhubi oye wathuma kumakethi.
Uhlolo: I-Adams Redline RPM 460 Dual Driver
NgoJulayi 29, 2005 - Umqhubi we-Adams Redline i-RPM Dual 460 umqhubi udibanisa ubuchwephesha obutshanje kumqhubi omnye. Musa ukuthatha ilizwi lethu kuyo - mamela uTham Watson .
Ngaphambi kwe- Open Senior Sundowns ka-2005, uA Watson wabiza i-RPM Dual 460 "ngumqhubi obalaseleyo ndibe nawo ebomini bam." Ewe, siyazi into ocinga ngayo: UWatson uhamba nabasebenzi bezotyelelo luka-Adams, yintoni enye eya kuthetha? Ilunge kakhulu.
Kodwa nantsi i-backstory: UWatson wayesanda kuphumelela kwi- Senior Senior yeBritish Open ye -2005 kwaye wayedlala ujikelezo lweSatifikethi saseMelika xa ebonakalisa intloko yomqhubi. Wayethetha-e-cuff kwaye akazange akhulume negama lomqhubi. Mhlawumbi wa ye nya niseka? Kunzima ukukwazi, kunikezelwa ukuba u-Watson, ngokwenene, uhlawulelwa ngu-Adams.
U-Watson wathi, "Lo mqhubi wayengumqhubi mkhulu," umqhubi obalaseleyo ndibe nawo ebomini bam. " UWatson useqalile ukusebenzisa i-RPM yesiBini 460 kuphela ngenyanga. "Ndiye ndiqhuba kakuhle kakhulu ukususela oko, ndiyibethe ixesha elide.
Umgca we-Redline u-460 oqhathaniswa nomqhubi we-RPM 430Q
I-Adams yayingeniswe ekuqaleni komqhubi we-Redline RPM 430Q, leyo nkampani eyayibiza ngokuba ngumqhubi wokuqala ukudibanisa intloko ephezulu, isithsaba esakhiweyo kunye nezisindo eziguqukayo.
I-430Q inomxholo we-430cc kunye neenqwelo ezine ezineesisindo, kwaye yayifaniswa ngokuthelekiswa ezininzi kwi- TaylorMade r7 Quad umqhubi .
I-Redline entsha ye-RPM ye-Dual 460, njengokulandelwa kwe-TaylorMade ukuya kwi-Qu7 ye-R7, i-r5 yesiBini, inamachwebini amabini anesisindo ngaphezu kwezine. Oko kwenza izinto zibe lula kwiigolisa ezingenayo imigangatho.
I-RPM yesiBini esingu-460 iphinde ikhudlwana kune-430Q. Enyanisweni, ngokwe-Adams, i-RPM Dual 460 ngumqhubi wokuqala we-460cc onesithsaba esakhiweyo kunye nezisindo ezilungelelanisiweyo, ukudibanisa ezintathu zentsha-mveliso kwi-teknoloji yokuqhuba umqhubi omnye.
Isithsaba esakhiweyo sivumela ubunzima obuninzi ukuba bubekwe kwindawo yeclabhu, kuncedise ukuvula i-angle kunye ne-spin. Iimpawu ezilungelelanisiweyo zinika iigolfu ithuba lokuzicoca kunye neendawo ezidityanisayo , ezikushiya okanye zisekunene ukukhuthaza indiza ethile yebhola.
I-Redline ye-460 yesiBini 2 Izisindo ezingcono kune-4
Ngaba iisisindo ezimbini zingcono kunezine? Kwiindawo ezininzi zegalufa, impendulo mhlawumbi iwebo. Ukutshintsha iinqwelo kukulula kunye nezibuko zombini ze-RPM ezimbini ezine-460 kunokuba ezine ezine-430Q. Kulula kokubili ngokwexesha kunye nemigudu, kwaye ngokuqondisisa umphumo kwi-ballflight. Ngokuqinisekileyo, awukwazi ukufikelela ngokubanzi nangamachwebini amabini anzima njengokuba unako kunye nezine, kodwa unokufumana oko kukusebenzayo ngokukhawuleza kwaye kulula.
I-Redline ye-RPM 460 yesibili iza ne-14 amagremu wokulinganiswa okulinganiswayo ngesimo seemvalo ezine: ii-scrws ezimbini ezi-7, i-12-gram kunye ne-2-gram. Izitya zinokuthi zitshintshwe ngaphandle kweengxoworha zesisindo esisodwa (enye kufuphi neyonto, enye kufuphi nesithende) ukudala umdwebo okanye ukutshabalalisa , okanye ukungenzi nto.
Izisindo ze-7-gram zichazwe kwi-clubhead, ngoko ke ukuba uthanda indlela i-RPM Eyodwa ye-460 ehlaba ngayo xa uyifumana, akudingeki utshintshe into. Ukuba uvakalelwa kukuba udinga i-bias draw, tshintsha kwisisindo se-12-gram kwisithende kunye ne-2-gram kwi-toe. Ukuze uhlasele i-fade, yenza okuchaseneyo.
I-Adams Redline i-RPM yesiBini-460 yayibetha kakhulu kunye nabo bonke abavavanya bethu, abaziva beyilo lokuzithemba kwidilesi kunye nokuxolela ngesenzo. Kodwa kwakukho iteknoloji yesisindo esinokuguqulwa esona sikhulu-esasilala ngayo-kokubili kube lula kangakanani ukusebenzisa izisindo kunye nokuqonda imiphumo, kwaye kwakulungele kangakanani ukuba umqhubi aguquke lula.
Lo mqhubi wayengakhange abhekwe njengenye yezona zinto zide zizame ngabaninzi bethu, kodwa ukuhamba komgama kwakuhle kakhulu. Ukuchaneka - ukubeka ibhola ngendlela efanelekileyo-yinto enkulu kunazo zonke kwiingcali zethu. Batshitshisa ibhola ngokubhetele emva kokugqiba izakhiwo ezinzima ezazisisebenzela zona, kwaye ukuzithemba okongezelelweyo kwakuyibhonasi enhle.
Izipho ezizithandayo ze-Skaters Skys
I-Golf Mat Isisombululo Esiphambili Kwi-Matshi Yokusebenza Yama-Mats
Indlela yokukhetha umbala we-Ski Goggle Lens
Iintlobo zee-Piton: Abaqhubi bazisa i-Pitons kwi-Anchors Secondary
Ukuphononongwa kwe-Snow White Inline umfanekiso weekhati
Iimpahla zokurhweba kwi-Harness Gear Gear
7 Izintandokazi zeBlack Skating Botts kunye neBlades
Iiklabhu zeGolf ezintsha zeHlabathi: Bona ntoni kwi-Pro Shops ngoku
Firewire Surfboards kunye neDominator
Konke malunga neCausative Causative ('le Causatif')
Iingoma ezili-10 eziphezulu zeKrisimesi eziphezulu ze-2011
Nkosi Brahma: UThixo Wendalo
Umgaqo 27: Ibhola elahlekile okanye ngaphandle kwamaBounds; Ibhola elibonelela (iMigaqo yeGolf)
Ziziphi iindawo ezahlukileyo phakathi kwama-Wasps, i-Yellowjackets, ne-Hornet?
Ngaba Abantu Bafa Ngethuba bedlala uPaintball?
Iimbali zeDimmu Borgir ezigqwesileyo
Ukuchasana: Wenziwa njani uEva?
I-Presente Simple o Presente Continue
Indlela Abafazi Abathatyathelwa Ngayo Abafazi Abalwela NgamaKhoboka
Iintlobo zeMkhukula kunye Nezizathu Zabo
I 5th Dimension
Ukuqonda iZiseko zeCalphi Programming
Study Unit Unit - Maine
Imbali yeNqaba yaseLondon
Indlela yokupapasha iSiganeko kwiKholeji